प्रायः सोधिने प्रश्न - शेन्ज़ेन हर्बिन आइस सिस्टम कं, लिमिटेड
किन तपाईंको फ्ल्याक आईस मेशिनहरू अन्य चिनियाँ फ्लेक आइस मेशिनहरू भन्दा बढी शक्ति बचत गर्दैछन्?
हामीले फ्लेक हिम वाष्पीकरणकर्ता बनाउन चाँदीको धातु प्रयोग गर्‍यौं। यो नयाँ प्याटेन्टेड सामग्रीमा सबै भन्दा राम्रो तापीय चालकता छ। पानी र रेफ्रिजरन्टको बीचको तातो एक्सचेन्ज अधिक कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसैले, बरफ बनाउने धेरै कुशल हुँदै गइरहेको छ, र कम रेफ्रिजरेसन शक्ति आवश्यक छ।
प्रणालीको वाष्पीकरण तापक्रमलाई अधिक हुन अनुमति दिइन्छ, जस्तै -१C सी। पानीले राम्रोसँग जमिन बाफ गर्न सकिने तापक्रमको साथ, जबकि अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले -२२ सी वाष्पीकरण तापमानको साथ आफ्नो प्रणाली डिजाइन गर्नुपर्दछ।
पावर बचत = बिजुली बिल बचत।
एक २० टी / दिन फ्लेक आइस मेशिनले तपाईलाई २० बर्षमा USD००००० सम्म बचत गर्न मद्दत गर्दछ। हामी प्रति १० केडब्ल्यूएच १ 14 अमेरिकी डलरको मूल्यमा बिजुली गणना गर्छौं।
पावर बचतको लागि, तपाई इभ्यापोरेटर बनाउन नयाँ सामग्री प्रयोग गर्नुहुन्छ। के त्यो नयाँ सामग्रीको लामो सेवा समय छ?
चाँदीको धातु धेरै अवयवहरूको बनेको हुन्छ, र यो परम्परागत कार्बन स्टीलभन्दा २ गुणा बलियो हुन्छ।
गर्मी उपचार पछि, नयाँ सामग्री संग बाष्पीकरण को लागी जीवन को लागी कुनै विकृति छैन। झा Zज्याiang्ग महासागर विश्वविद्यालयमा पूर्ण परीक्षण गर्नको लागि हामीले पेशेवर टीम भाडामा लिएका छौं। र हामीले यस सामग्रीलाई बजारमा 1000 बर्षमा १००० भन्दा बढी मेशिनहरूको साथ परीक्षण गरेका छौं।
तपाईंको बरफ मेसिनको लागि कति
A: हामी ग्राहकहरूको आवश्यकताको आधारमा उद्धरण गर्नेछौं।
त्यसोभए ग्राहकले हामीलाई निम्न जानकारी प्रस्ताव गर्नुपर्दछ त्यसपछि हामी सोही अनुसार उद्धृत गर्न सक्छौं।
१. कस्तो किसिमको बरफ बनाउने? फ्लेक आइस, ट्यूब आइस, ब्लक आइस, वा अरू?
२.२ कति घण्टा बरफ दैनिक २ make घण्टा भित्र बनाईन्छ?
The. बरफको मुख्य उपयोग के हुनेछ? फ्रिजिंग माछाको लागि, वा अरू?
Me. मलाई बरफ व्यवसायको बारेमा तपाईंको योजना बताउनुहोस्, त्यसैले हामी तपाईंलाई तपाईंको अनुभवको आधारमा उत्तम समाधान प्रस्ताव गर्नेछौं।